Imikhiqizo yezinyosi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Imikhiqizo yezinyosi
Indlela yokugcina impahla yokuphulukisa ye-jelly yasebukhosini
In ukufuya izinyosi, i-royal jelly ibhekwa njengomkhiqizo omangalisayo kakhulu. Ngenxa yalesi sihlahla esiyisimangaliso, izinyosi zingondla inzalo yabo, kanye nendlovukazi yabo, ebuyisela isidleke nesakhamuzi esisha. Ake sibone ukuthi singagcina kanjani i-royal jelly. Uyazi? I-Royal jelly ikhiqiza izinyosi-umhlengikazi.
Kumaphi amacala athatha i-jelly royal, imiyalo yokusetshenziswa kanye nomthamo
Abaningi bezwe ngokuphindaphindiwe ngomkhiqizo wemvelo oyingqayizivele, njenge-jelly yasebukhosini. Futhi lo mkhiqizo waziwa ngamanye amagama - "i-royal jelly". I-Royal jelly bee - kuyini? Lezi zinto ziyimfihlakalo ezigciniwe yizigcawu zezinyosi ezisebenzayo ezihlala esidlekeni. Ikhiqizwa izinambuzane ezineminyaka engu-5-15 ubudala.
Indlela yokuqoqa inyosi yezinyosi, ukusetshenziswa kwemikhiqizo yezinyosi
Inyosi ye-bee ivame ukusetshenziswa njengemithi ephumelela kakhulu. Yiqiniso, kubalulekile ukuqoqa nokusebenzisa kahle inyosi yezinyosi, ngoba, ngaphandle kokwelapha umzimba, kungabhubhisa. Ngezansi sixoxa ngezinzuzo zezinyosi zezinyosi nendlela yokuyisebenzisa. I-bee venom ibukeka ini? Uma inyosi ikukhipha, ngeke ukwazi ukubona ubuthi bayo, ngoba iwuqala ngaphansi kwesikhumba sakho ngesamba esincane kakhulu - kuphela u-0.2-0.8 mg.
Izinhlobo zemikhiqizo yezinyosi, ukusetshenziswa kwabo ngabantu
Kulesi sihloko sizokhuluma ngemikhiqizo yezinyosi, abantu abayisebenzisa kakhulu ezimbonini ezihlukahlukene. Sizokutshela ukuthi yikuphi ukutholakala kwezinyosi, yini ebaluleke kakhulu ubisi lwe-bee kanye nobisi lwe-drone, futhi ikutshele ukuthi yiziphi izindawo ze-bactericidal wax. Uyazi? Izinyosi ziyindlela ekhethekile yezinyosi.
Ukuthatha nini futhi kanjani ukuthatha kahle i-jelly royal adware
Wonke umuntu uyazi ngezinzuzo zemikhiqizo yezinyosi ezivamile, njengobusi kanye ne-propolis. Kukhona nomkhiqizo onjalo okhiqizwa izinyosi njengeJelly royal. Lena umkhiqizo wokuphulukisa osetshenziselwa ukwelashwa ne-cosmetology. Izinyosi zikhiqiza ukondla isibeletho nokukhula komzimba. Izimpungushe zezinyosi ezivamile zithola ubisi lobukhosi kuphela izinsuku zokuqala ezintathu zokuphila kwazo, okuyizinsuku ezingu-60-80.
Yeka indlela ewusizo ngayo i-coriander uju, amandla okuphulukisa we-honey cilantro
I-Coriander (lat. - i-Coriandrum) isitshalo saminyaka yonke se-herbaceous etromaslennoe somndeni wesambulela. Abantu abaningi bayazi i-coriander ngenxa yembewu yayo, esetshenzisiwe njenge-spice yokudla elimnandi, noma ngenxa yeziqu namaqabunga, okuthiwa i-cilantro (quinda) futhi isetshenziselwa imifino esiphunga. Okuncane okujwayelekile ukuthi i-coriander ibe isitshalo seju, enikeza uju oluhle futhi olunempilo kakhulu.
Kungani ubusika be-phacelial buwusizo?
Kunzima ukucabanga ukuthi umkhiqizo wokudla uwusizo futhi ujabule kunoju. Kunezinhlobonhlobo zezinyosi ezihlukahlukene, ngasinye esinezakhiwo zayo ezihlukile. Kodwa-ke, izinhlobo ezithile kuphela ezibaluleke kakhulu ekukhuleni izinyosi kanye nemithi yendabuko inomumo wokuphulukisa ngokukhethekile. Yilokho kanye uhlobo lwezinyosi ne-phacelia.
Iyini impova ewusizo ewusizo, izakhi zokwelapha kanye nokuchasene komkhiqizo?
Imikhiqizo eminingi yezinyosi isetshenziswa umuntu kusukela esikhathini esidlule. Ngokuyinhloko, uju nama-wax bajwayele wonke umuntu futhi basetshenziswa kabanzi. Kodwa-ke, akubona wonke umuntu owazi ukuthi kukhona okungenani imikhiqizo efana nambili, eyothola uhlelo lwazo kwizimboni ezihlukahlukene. Ngakho-ke, namuhla sizokhuluma ngalokho impova yezinyosi, ukuthi iyasiza kanjani nokuthi ingasetshenziswa kanjani ekuphileni kwansuku zonke.
Izakhiwo eziwusizo ze-wax moth, ukusetshenziswa nokuphikisana
Naphezu kokuthi i-wax moth iyisitha esiyinhloko sabanikazi bezinyosi, ngezinye izikhathi ibhubhisa wonke ama-hives, emithi yokwelapha, le nambuzane iyabizwa njengendlela yokulwa nesifo sofuba nokungazalwa. Ngezansi sibheka ngokucophelela okuphawulekayo kokwelashwa nge-tincture ye-tin moth. I-Wax moth tincture: incazelo I-moth ya wax, noma i-bee moth, iyingozi kakhulu eyingozi yezinyosi zezinyosi, ngoba kubeka kuwo amaqanda ayo.
Ubuningi beLinden: incazelo, ukwakheka, ukuzuza nokulimala
Ekuphekeni komuthi wendabuko usebenzisa uju, i-lime ivame ukushiwo. Abaningi bazame, kodwa akubona wonke umuntu owaziyo ukuthi umkhiqizo wezinyosi uhlukile. Ngenxa iphunga elimnandi, elimhlophe elimhlophe nombala ophuzi nokunambitheka okungenakuqhathaniswa, uju we-lime kubhekwa njengenani eliyigugu kakhulu kuzo zonke izinhlobonhlobo zoju lwezemvelo.
Ukusetshenziswa kwe-bex in imithi yendabuko ne-cosmetology: izinzuzo kanye nokulimala
Ukufuya izinyosi kuye kwabanikeza abantu hhayi uju kuphela, kodwa futhi banesisindo esiyingqayizivele njenge-wax. Ososayensi bahleka usulu ukuthi waba yi-polym yokuqala eyadalwa izidalwa eziphilayo. Ngisho nasezikhathini zasendulo, zazimbozwa ngamanxeba, futhi amaqhawe asezintabeni zamaGreki zasendulo ayeyazi kahle le mkhiqizo omuhle wokuloba izinyosi. Ngakho-ke, i-Odysseus yayisebenzisa esikhundleni se-earplugs eqenjini lakhe ukuze imlondoloze ekuhlabeleleni izinsimbi, futhi uDaedalus wamdala amaphiko kuye evela ku-Icarus.
Izindlela ezinhle kakhulu zokuhlola uju ngemvelo
Uju umkhiqizo owusizo kakhulu futhi alusetshenziselwa ukudla okunomsoco kuphela, kodwa futhi kusetshenziswa imithi ne-cosmetology. Ukuze umphumela wayo ube nomzimba omuhle, umuntu kufanele anake ngesikhathi sokuthenga ezindaweni zayo. Indlela yokuhlola ikhwalithi yobusi? Impendulo yalo mbuzo ilula. Imiphumela enembile kunazo zonke izonikeza ukuhlaziywa kwelabhoratri.
Ungathatha kanjani impova yezinyosi, izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana komkhiqizo
Omunye wemikhiqizo eyingqayizivele futhi ewusizo kakhulu wezinyosi, okuyinto izinyosi ezilungiselelwe ngokucophelela kusuka impova yi-bee impova. Izinzuzo zalo mkhiqizo emithi yendabuko ziye zaziwa amakhulu eminyaka. Cabanga ukuthi inyosi ye-perga iyini, yiziphi izinto eziwusizo ezinawo nokuthi ungayithatha kanjani kahle.
I-solar wa-do-it-yourself: imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo
Wonke umuntu ozinyosi ohloniphayo uyazi: i-wax ayikwenzeki kakhulu. Ngakho-ke, uma emva kwesikhathi esihle unamakhilogremu ambalwa ama-honeycombs amasha - ungacabangi ngisho nokuwagcina ebhokisini elingemuva. Kulesi sihloko, uzofunda ukuthi ungazuza kanjani ezinqolobaneni zokugcina izinyosi ezibonakala sengathi awunamsebenzi futhi wenze ukuhlanzwa kwe-wax okudingekayo.
Ukuhlanzwa kwe-Wax: ukuthi ungayisebenzisa kanjani ekulondolozeni izinyosi
Abaningi bezinyosi bezinyosi bayazibuza ukuthi bazokhipha kanjani i-wax ngenani lemali encane. Ngesikhathi esifanayo, ukuzama ukuthola imininingwane mayelana nezinqubo ezihlukahlukene, ungatholi umphumela olindelekile. Yingakho kufanelekile ukucabangela le nkinga ngokuningiliziwe. Izici zokusebenzisa idivayisi ekuhlungeni ukulondoloza u-Wax - enye yamadivayisi awenza umsebenzi endaweni yezinyosi.
Indlela yokupheka i-mead ku-vodka ekhaya: zokupheka
Abaningi bethu bacabanga ukuthi uju utshwala kuphela i-vodka, lapho ubuningi bengezwa khona. Kodwa lo mbono ukhululekile kakhulu. Eqinisweni, ukulungiswa kwesiphuzo kudala kubandakanya ukupheka nokuvutha uju, futhi ifomu elihlanzekile eliqediwe utshwala esiphuzweni asidluli ku-16%.
Uju lwe-Chestnut: yini ewusizo, ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nokuphikisana
Uju lwe-Chestnut luyizinhlobonhlobo ezingavamile, ezingavamile ezingavamile ukudayiswa. Kodwa-ke, ufanelwe ukunikezwa isikweletu ngenxa yezinto zakhe eziyingqayizivele eziwusizo. Ukuba umkhiqizo ophulukisa ngempela, unomphumela omuhle emzimbeni womuntu, futhi ukwakheka kwawo kunezici ezihlukile.
Kuyini i-zabrus ekufuyweni kwezinyosi nendlela yokuphatha ngayo
Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu basebenzisa imikhiqizo yezinyosi ngezidingo zabo. Uju nezinye izinto eziningi ezivela kuso zisetshenziselwa ukudla, ezisetshenziselwa ukwelapha nokuvimbela amakhaza. Enye yemikhiqizo ewusizo kakhulu futhi eyingqayizivele esinikezwe ngokwemvelo kanye nezikhwama zezinyosi yi-zabrus. Kulesi sihloko sizoxoxa ngalesi sipho esiyingqayizivele semvelo nendlela yokusebenzisa i-zabrus ngendlela efanele.
Kungani uju ebizwa ngokuthi umkhiqizo wesifazane?
Inyosi yama-Acoustic ingokwenani lezidlo ezidliwayo zemvelo, okungaziwa ngabantu abambalwa kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo uhlukile kulohlobo lwawo futhi unezici eziningi eziwusizo. Kulesi sihloko sizokutshela ngokuningiliziwe ngoju uju: ukuthi kuyini nokuthi kuyasiza kanjani. Ukunambitha nokubukeka Lo mkhiqizo wezinyosi awuvamile.
Kuyini uju omhlophe
Akubona bonke abathandi bezinyosi abakwazi ukuthi kukhona umbala omhlophe walowo mkhiqizo owusizo, onokuhluka kwawo okhethekile, esizoxoxa ngakho kulesi sihloko, thola ukuthi ubusika obumhlophe obaluleke kangakanani nokuthi buwenziwe ngani, futhi kusiza ukuhlukanisa inkohliso emkhiqizo wangempela. Ukunambitha nokubukeka Uma sikhuluma ngomkhiqizo we-bee ohlanzekile ngaphandle kokudaywa nezithasiselo, khona-ke kuyoba nombala omuncu, ngoba akunakwenzeka ukuphoqa izinyosi ukuqoqa ubisi kuphela kulezo zitshalo ezifaneleke kakhulu.